एनआरएनमा मेरो उम्मेदवारी किन? :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
एनआरएनमा मेरो उम्मेदवारी किन?
जमुना गुरूङ काठमाडौं, असोज २७
गैरआवासीय नेपाली संघको आठौं अधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छु।
प्रश्न यहाँ मेरो उम्मेदवारीको मात्र होइन, विदेसिएका हामी सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको साखसँग जोडिएको र संस्थालाई संस्थागत गर्ने विषयको हो। हामीप्रति ५० लाख विदेसिएका नेपालीहरुको खबरदारी छ। जसले भोलिका दिनमा संस्थाको साख र मर्यादालाई उच्च राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय हो।
मेरो भावना पदसँगभन्दा भूकम्पपीडितसँग गाँसिएको छ। हामीले भूकम्पपीडितका आँशुको मूल्य र उनीहरुको भावना बुझ्नुपर्छ। भावना बुझेर उनीहरुका जिम्मेवारी लिइदिनूहोस् भनेर हामीले भनेकै हो। तर, छाँटकाँट देखिएन। त्यसैले मैले उम्मेदवारी दिएँ। भोलिका एनआरएन पुस्ता र लाप्राकका भूकम्पपीडितका निम्ति।
लाप्राकका साना नानीहरुको न्यूनतम गाँस, बास र कपासको आवश्यकता सम्झन्छु। यो सबै व्यवस्था गर्नसक्ने एउटा भिजन र नेतृत्व चाहिएको छ। भूकम्पपीडितका भावनाको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्न मैले उम्मेदवारी दिएकी हुँ।
एनआरएनले भवन बनाउने योजना अघि सारेको सन् २००७ तिर हो। पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेको नेतृत्वले भवन बनाउने अभियान अघि सारेको हो। रोकिएको यो अभियान मेरो नेतृत्वमा अबका ६ महिनाभित्र पूरा गर्नेछु। लाप्राकलाई मेरै नेतृत्वमा पूर्ण बनाउन नसकेपनि एउटा उचाइमा पुर्याउनेछु।
(घले गैरआवासीय नेपालीसंघकी अध्यक्ष उम्मेदवार हुन्)।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २७, २०७४, ०७:४५:५३